Ukubuka okujulile kwe-Testosterone Cypionate | I-AASraw
Ukubuka okujulile kwe-Testosterone Cypionate
/Blog/Gallery/Ukubuka okujulile kwe-Testosterone Cypionate
Posted on 11 / 19 / 2018 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Ezweni lapho ama-steroid asebekhona futhi wonke umuntu uwasebenzisa ukuze afinyelele imigomo yawo yomzimba, kunesidingo sokuba ufunde kabanzi nge-Testosterone Cypionate. Sizoxoxa ngemininingwane eminingi mayelana nale steroid esukela kulesisindo se Testosterone, indlela yokufaka i-testosterone, indlela yokubhekana nokugqithisa kwe-Testosterone, ukubuyekezwa kwe-Testosterone Cypionate phakathi kwabanye. Konke okufanele ukwenze ukuhlala phansi lapho sifika ezweni likaTestrosterone Cypionate.
Ukukhathazeka ngesayithi elingcono kakhulu Thenga i-Testosterone Cypionate online? I-AASraw.com iyindlela enhle kakhulu. Singamabhizinisi aseChina asebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni, ekukhangiseni nasekusatshalaliseni izixhumanisi eziphathelene nemithi nemikhiqizo kuhlanganise ne-Testosterone Cypionate.
Ngakho kuthiwa yi-testosterone cypionate?
Testosterone i-steroid yama-anabolic eyayiyiyokuqala yokwenziwa emakethe. Ngakolunye uhlangothi, i-testosterone Cypionate iyinhlanganisela ye-Testosterone eyenza kancane kancane, injectable eside futhi i-oil injectable. Isetshenziselwa ukuphatha i-hypogonadism okungukuntula ku-Testosterone emzimbeni obangela izinkinga ezihlukahlukene ezihlobene namadoda.
Ukuba yisidakamizwa somuthi, ungase uzinikele yona induduzo yendlu yakho ngemuva kokuba udokotela ekutshele ukuthi ungakwenza kanjani lokho. Ngenhlanhla i-self-injection, futhi lokhu kwenza kube lula ukuyisebenzisa. Itholakala futhi kufomu layo elijwayelekile.
Testosterone yaqala ukukhiqizwa ku-1935, futhi ngemva kweminyaka emibili yakhululwa emakethe njengomuthi wezokwelapha. Ekuqaleni, itholakale efomini yepellets futhi ngokuhamba kwesikhathi yayisimo se-ester engumjovo we-intramuscular njengo-Testosterone Cypionate.
I-Methyltestosterone, enye ye-anabolic steroids yokuqala yokukhishwa yenziwa ku-1935. Ngeshwa, yayihlanganiswe ne-hepatotoxicity, futhi ngenxa yalokhu, yaba yisikhathi esingasebenzi. I-testosterone esebenza isikhathi esiningi i-Testosterone Cypionate yasungulwa emakethe phakathi ne-1950s yinkampani okuthiwa i-Upjohn. Ekuqaleni yayithengiswa ngaphansi kwegama le-Depo-Testosterone futhi lisaziwa ngegama elifanayo.
U-Upjohn uye wabandakanyeka ekwakhiweni kweDepo-Testosterone esikhathini esedlule eminyakeni engamashumi amahlanu kusukela kuqalisiwe. I-Testosterone Cypionate inqatshelwe ukuba yi-Testosterone enanthate yizici eziningi zomzimba nabadlali. Laba bobabili bafana, kepha ukuphila kwabo okuyingxenye ehlukile.
I-Testosterone Cypionate yayiphakathi kwe-steroids yama-anabolic eyathola imvume yokuba isetshenziswe njengesidakamizwa sezokwelapha ku-1970s. Kwabe sekushiwo yi-FDA ukuthi isetshenziswe kuphela ku-therapy ye-Testosterone. Kule minyaka, ukusetshenziswa kwayo kuvinjelwe ngoba akufanelekile ukusetshenziswa kwezingane nabesifazane. I-testosterone cypionate iye yadluliselwa njengesidakamizwa sokulawula izidakamizwa zesilisa lapho kuthathwa umthamo we-200mg wamasonto onke.
Uyini testosterone cypionate esetshenziselwa?
I-Testosterone Cypionate inezinto eziningi ezisetshenziswayo ekuphileni kwethu. Nazi izicelo.
Emhlabeni wempilo, umuntu uhlale ezama ukulunga. Kungakhathaliseki ukuthi u-weightlifter noma umdlali wezemidlalo, uzoqonda ukuthi ngezinye izikhathi ukuncintisana kungaba yingozi. Okunye kunokwaneliseka okwenzeka ngokuwina, ukunikezwa indondo noma ukuthola indawo eqenjini lobuchwepheshe kuyinto ekhanga kakhulu kuningi. Ukwenza lokho okufeziwe empilweni yakho kungathatha iminyaka eyishumi noma ngaphezulu kuye ngomzimba wakho. Kodwa izindaba ezinhle yisidakamizwa esithuthukisa ukusebenza njenge-Testosterone Cypionate engakwenza ufeze imigomo yakho yokufaneleka.
Ngakho-ke kungani le mithi ijabulisa kakhulu ukuqina kwempilo? Benza imisipha ibe mkhulu futhi ngesikhathi esifanayo yenza ukuba ululame ngokushesha ekusebenzeni kanzima ngokunciphisa inani lomonakalo wamasipha okwenzeka ngesikhathi seseshini. Inzuzo ngalokhu ukuthi abagijimi bangakwazi ukuqeqesha ngokuqinile futhi njalo ngaphandle kokwedlula isikhathi.
I-Testosterone Cypionate isiza ekugcineni ikhwalithi yemisipha namandla. Iphinde igcine amandla nesisindo samathambo. Enye into enkulu ukuthi uzohlala ulangazelela izikhathi zakho zokuqeqesha kusukela lo muthi uzothuthukisa futhi uqinise ukusebenza kwakho.
I-Testosterone Cypionate ikhuthaza ukulahlekelwa kwegciwane ngokuthuthukisa umsebenzi we-metabolic. Le steroid iyakwazi ukwenza lokhu ngokubopha i-androgen receptor kalula ngenxa yalokho kudala ukwehla kwamafutha nokuvimbela ukwakheka kwamaseli amasha amasha.
Liphinde lenze ngcono ukusebenza komzimba emzimbeni. Yakha imisipha ngokushesha ngakho-ke ukudla okudlayo kuyadliwa kusetshenziselwa ukuthuthukisa imisipha eminingi kunokuba igcinwe njengamafutha.
I-Testosterone Cypionate isetshenziselwa ukwelapha okunye okufakelwa i-androgen. Njengamanje, kuvunywe yi-FDA yokwelashwa kwe-hypogonadotropic ne-primary hypogonadism (noma itholakale noma ikhulelwe). Lesi simo yisifo lapho abantu besilisa bengakwazi ukukhiqiza i-hormone ye-Testosterone ewanele. Uyini umehluko phakathi kokubili?
I-hypogonadism ye-hypogonadotropic- Yenzeka lapho ezinye izingxenye zobuchopho (i-pituitary gland noma i-hypothalamus) ekhuluma nama-testicles ngesikhathi sokukhiqiza u-testosterone.
Iyini i-nandrolone powder esetshenziselwa izinzuzo / nandrolone?
Ubuncane be-hypogonadism- Kwenzeka lapho ama-testicles engakwazi ukukhiqiza u-testosterone okwanele.
Uma umuntu ehlupheka ngalokhu uhamba; ukushayela ucansi oluphansi, ukungasebenzi kahle kwe-erectile (izinkinga zokuthola nokugcina ukulungiswa), ukuhlushwa okungalungile nokuguquguquka kwemizwelo. Kungadala futhi ekudleni kwegazi, ukulahleka kwezinwele zomzimba kanye nezinwele zomzimba, i-gynecomastia (ukuthuthukiswa kwesifuba) nokunciphisa ukukhula kokubili kwamagundane kanye ne-penis. Kodwa-ke, ukuphepha kwalo ekuphatheni ubuzenzisi bokuqala kwe-hypogonadism emadodeni akukaqinisekiswa.
Ukwengeza, isetshenziselwa ukwelapha i-osteoporosis, i-hormone replacement therapy kuma-transgender abesilisa, i-oligospermia (ene-sperm count count), ibambezele ukukhulelwa kwesilisa, isifo sebele, nesifo somdlavuza wesifuba.
I-testosterone cypionate isebenza kanjani?
I-Testosterone Cypionate ingenye ye-androgens engapheli ehilelekile ekukhuleni kwamalungu wesilisa ocansini. Kubuye kusize ekulondolozeni izici zobunikazi zesibili. Zibandakanya ukusabalalisa kwamafutha, izinguquko emzimbeni womzimba, ukuqina komthamo wezwi, ukukhuliswa kwamakhemikhali, nokukhula kwe-prostate nokuvuthwa.
Lesi sidakamizwa sinesakhiwo esifanayo ne-Testosterone, kodwa inzuzo ukuthi inezinga elide lokuphila nokukhululwa. Phakathi namahora angu-24 wokuphatha kwawo, kwandisa izinga le-testosterone kuze kufike ku-400%. Amazinga we-androgen angase ahlale ephezulu ezinsukwini ezintathu kuya kwezinhlanu ezilandelayo ngemuva kokuphathwa kwawo. Uma sekukhona ukuphathwa kwe-intramuscular yalesi sidakamizwa, kungabangela ukuvuvukala kwendawo nokushintshashintsha kwe-libido nomoya.
I-Testosterone Cypionate isebenza ngezindlela ezimbili ezahlukene. Okokuqala ngukuguqulwa ku-estradiol ngokulandela ukusebenza kwe-receptors ezinye ze-estrogen. Iphinde isebenze ngokusebenzisa i-androgen receptor activation.
Kuyinto enebolic esterified ngakho-ke inomswakama kakhulu amafutha. I-Testosterone kanye ne-esters yayo kufanele ilandelwe ngokusebenzisa umjovo ngoba ingasebenzi ngokushesha ngesibindi uma inikezwa ngomlomo.
Uma sekukhona ukuphathwa okunamandla kwalesi sidakamizwa, ukusabalalisa kwayo kuhamba nge-1 L / kg.
Uma ukuxilonga kwenzeka, umuthi ungena ekujikelezeni kwegazi okuzocutshungulwa. Phezu kokuguqulwa, i-40% yayo ibophezela ku-globulin ye-plasma kuyilapho i-2% yayo ishiywe ingavunyelwe noma ifakwe kwamanye amaprotheni afaka i-albinin.
Ukuze lo muthi uqale ukusebenza, udinga ukucutshungulwa ngama-enzyme. Umsebenzi we-catalyst ukuphula ubuhlobo phakathi kwe-Testosterone nengxenye ye-ester yale molekyuli. I-Testosterone Cypionate inesikhathi eside sokucubungula ngenxa yobukhulu obukhulu besonto layo. Lapho ukuhlukana kwenzeka, i-testosterone ihlehlisiwe ibe yi-17 ketosteroids. Yenziwa ngezimbili, ngokungafani nemigwaqo. I-dihydrotestosterone ne-estradiol yiyona imetabolite esemqoka esebenzayo. I-Testosterone ihlehlisiwe ibe yi-DHT emgqatsheni we-urogenital, isibindi, nesikhumba. I-dihydrotestosterone ibuye ihlelwe phansi ibe i-androstanediol.
I-90% yesilinganiso se-testosterone esinikezwe nge-intramuscularly isusiwe emcimbini ngesimo se-glucuronic, i-testosterone's sulfuric acid conjugates kanye nama-metabolites alo. Emayelana ne-6% ye-testosterone esele isusiwe ngendwangu ngokuvamile efonini elingavumelani.
I-half-life Testosterone Cypionate ingenye yezona eside kunazo zonke kusukela cishe ezinsukwini eziyisishiyagalombili.
Amaphuzu avelele we-testosterone cypionate
I-Testosterone Cypionate isetshenziselwa ukwelapha izimpawu zenkolo ye-hypogonadism emadodeni. Lesi simo senziwa ngumzimba wokuhluleka ukukhiqiza isifo somzimba we-hormone testosterone.
I-Testosterone Cypionate itholakala ngesimo sesisombululo esingenayo injectable. Kumele kusetshenziswe emisipha, futhi into elula kunazo zonke ukuthi ungakwenza ngokwakho ngenduduzo yendlu yakho emva kokuxoxa ngendlela ongayenza ngayo nodokotela wakho.
Isixazululo se-Testosterone Cypionate sinikezwa kokubili izidakamizwa ezijwayelekile kanye negama lomuthi. Igama lomkhiqizo yi-Depo-testosterone.
Imiphumela ye-testosterone cypionate yokwakha umzimba
Noma ubani osebenzise i-Testosterone Cypionate angafakazela ngemiphumela emihle eyinikeza emzimbeni. Amandla ayo akwenzile njengento ephezulu ye-steroid emakethe. Ukwengeza, inikeza imiphumela esheshayo futhi emangalisayo.
Uma usuyisebenzise amasonto ayishumi nambili, uzoba;
Ukwandisa ukulahleka kwamafutha okungenzeka. Kungenxa yokucindezelwa kwe-estrogen.
Ilungisa imisipha ngokusheshisa ngokukhipha umsebenzi we-satellite cell.
Ngokulondoloza i-nitrogen, kukunika inzuzo enkulu yemisipha.
I-Testosterone Cypionate ibuye ikhulise amandla akho.
Futhi, i-Testosterone ivimbela umphumela wamanye ama-hormone angabangela ukulahlekelwa kwemisipha ngesikhathi sesigaba sokusika.
Umphumela ohlangothini lwe-testosterone cypionate
Ngokumangazayo, le mithi ayibangeli ubuthongo. Kungakhathaliseki ukuthi ungabhekana kanjani nemiphumela emibi ye-Testosterone Cypionate, izindaba ezinhle ukuthi zikwazi ukuphathwa.
Imiphumela emibi kakhulu ekhona;
I-Acne- Ukusebenzisa i-Testosterone Cypionate ingabangela izibhamu. Kungase kube inkinga, kodwa uzothanda iqiniso lokuthi ukwelashwa okuphumelelayo kuyatholakala. Imithi yokwelashwa efana ne-glycolic acid, i-benzoyl peroxide, ne-salicylic acid yizona ezifanele kakhulu ukwelashwa kwe-acne emnene kuya ekulinganiseni. Kumele futhi ugcine ukuhlanzeka okuhle kobuso kanye nemikhuba yokuthola isikhumba esicacile.
Ukukhula kwezinwele- Le mithi ingabangela ukukhula kwezinwele ezindaweni ezingalindelekile. Uma unesifo esiningi ngokweqile noma ebusweni, kunezindlela ezithile onganciphisa ngazo. Okwokuqala ukugcoba usebenzisa i-shaver kagesi noma i-razor. Uma lokhu ukugcoba kuvame ukukunika ukushisa kwe-razor, ungase ucabange ukuthenga ukhilimu ophuzizayo.
Ungase ucindezele noma ugweme ukuxosha izinwele kusuka empandeni. Ukuxosha kungenye indlela esheshayo yokukhipha izinwele ezimpandeni. Ukusetshenziswa kwamakhemikhali aqinile abizwa ngokuthi ama-depilatories angakusiza kakhulu, kodwa uma unesikhumba esibucayi, kufanele uqale uvivinye endaweni encane. Ezinye izindlela zokuphikisa izinwele ezidlula ngokweqile ziwukusebenzisa imithi, ukususwa kwezinwele ze-laser, kanye ne-electrolysis.
Ukuvuvukala nobuhlungu endaweni yokujova-Awudingi ukucindezeleka ngenxa yokuthi uke wabhekana nosizi noma ukuvuvukala endaweni yomjovo. Uma usudutshulwa ngaphambili, usuvele usho ukuthi ubuhlungu buyinto evamile uma ihlala izinsuku ezimbalwa. Ukuze unciphise lokhu, qiniseka ukuthi uhambisa indawo ejojelwe. Uma uhlala unganyakazi, le ndawo ingalimala ngaphezulu. Ukwenza ubuhlungu bungaphathwa kahle, ungase ucabange ukuphumula ubuhlungu ukuze usize ngobuhlungu nokuvuvukala. Enye indlela enhle yokubhekana nalokhu ngokuguqula iphakethe elifudumele endaweni engekude edutshulwe. Kodwa-ke, kufanele ufune udokotela uma usuqaphela ukuthi ubuhlungu noma ukuvuvukala akusikho ukuxhaswa phakathi kwamahora angu-48.
I-Gynecomastia (ukwandisa isifuba) -Ungase uqaphele ukuthi isifuba sakho siba sikhulu ngemuva kokusebenzisa le mithi. Lokho akufanele bakhathazeke kakhulu; amathiphu alandelayo azofika kahle. Owokuqala usebenzisa amashirts okucindezela. Kuyinto enhle kakhulu ngoba kulula kulo mkhwalithi futhi kunciphisa ukubukeka kwesifuba ngempumelelo. Ungase futhi uzame ukuzivocavoca kwe-gynecomastia njengokuthanda ukuqeqeshwa kwesikhashana esiphakeme (HIIT), ukuqhuma-ups, i-dumbbell incline press, futhi uhlezi umugqa. Ukuze unciphise ukubonakala kwesifuba sokuvuvukala, kufanele ulwele kanzima ukwakha imisipha. Kuzokwenza amabele amakhulu avele kancane. Futhi ngenxa yokuthi amafutha akhuthaza ukuvuvukala, kufanele ugweme ukudla okunamafutha futhi udle amafutha enempilo afana namajikijolo, imifino eluhlaza, izinhlanzi ezinamafutha kanye namazambane. Enye indlela yokuvimbela i-gynecomastia iwukuba kwenziwe ukuhlinzwa okuzokhipha amafutha endaweni yesifuba.
Ukuvinjelwa okuvamile- Ukuba nezenzo ezijwayelekile kungokwemvelo kepha ukungafunwa kungabhubhisa kakhulu. Akufanele kukuvimbele ekusebenziseni i-Testosterone Cypionate. Ungakwazi njalo ukubhekana nokulungiswa okungavamile okuza kwakho. Ngamanje uyazibuza ukuthi ungayenza kanjani. Uma kwenzeka, akudingeki uzizwe sengathi izwe lichotshoza kuwe; hlala phansi, uphefumule kancane futhi uhlale uzolile. Ukuze unciphise ukuhlazeka okuza nalo, ungafaka ukulungiswa usebenzisa i-laptop, ihembe noma ijeketi. Asikho isidingo sokukhathazeka, wonke umuntu uthola lokhu futhi cishe akekho oqaphele ukuthi unalo. Ungacabangisisa, uzame futhi uziphazamise, uthathe ishazi ebandayo, ube nokugeza okufudumele noma ube nokuzivocavoca okunomzimba okufana nokugijima. Kodwa-ke kunconywa ukuthi uma ukuphazamiseka kuyisihlungu, kufanele ufune udokotela.
Izimiso ezihlala isikhathi eside kunokujwayelekile- Ukulungiswa okuhlala amahora amane noma ngaphezulu akusikho ngaphezulu. I-Testosterone Cypionate ingabangela lokhu, futhi ungase ubhekane nalokhu ngokubeka amaphakethe e-ice endaweni. Ngalokhu, ukulungiswa okuqinile kungahle kudlule ngomzuzu. Udokotela angase akunike amaphilisi noma amajoki ukubhekana nalo.
Ikhanda - Ikhanda lingase lenziwe ngokusetshenziswa kwe-Testosterone Cypionate. Kungaba nzima ukusebenza, ukushayela noma ukuqhuba ingxoxo ngokukhwehlela ikhanda kodwa ungenza okungaphezu kokulala embhedeni futhi ulindele ukuba uhambe uqobo. Ungase uzame ukuthatha izinhlungu zokunciphisa i-aspirin, naproxen, ibuprofen, ne-acetaminophen. Ungasebenzisa futhi amathiphu alandelayo ukuze ubhekane nobuhlungu. Vala amehlo akho uphinde uphumule. Ungase futhi uhlaziye amathempeli akho nentamo yakho. Kunconywa ukuthi uphumule futhi uzame ukubeka indwangu efudumele noma isibambo sokufudumala nxazonke ze-skull nendawo yentamo. Funa usizo lwezempilo uma ubuhlungu buqhubeka.
Ukushintshashintsha kwemizwa- Ngezinye izikhathi ungase uzizwe sengathi ufuna ukuchitha usuku lwakho wodwa ngenkathi kwezinye izinsuku, ungase uzizwe ujabule. Kuyinto evamile uma nje ingathinti imisebenzi yakho yansuku zonke. Ngakolunye uhlangothi, ukuguquka kwesimo sengqondo esibi kungase kube uphawu lokuthi okuthile akulungile. I-Testosterone ingabangela lokhu futhi uma ikwenza, ukubhekana nayo kuyisimo se-snap. Uma uvame ukuzivocavoca njalo, uzoqaphela ukuthi ukwenza lokho kuphakamisa isimo sakho sengqondo ngokushesha. Ukudla ukudla okunempilo akubalulekile kuphela empilweni yakho yangokwenyama, kodwa kuyasiza ekuthuthukiseni isimo sakho sengqondo. Kuzodingeka futhi usebenzise ukuphumula ngokuhlanganyela ekukhuliseni imikhuba efana nokuzindla ne-yoga. Buza udokotela uma uzizwa sengathi ukuguquka kwemizwelo yakho kuthatha impilo yakho.
Ukunciphisa inani lomuthi lomuntu uma isidakamizwa sisetshenziselwa ukulinganisa okuphezulu- Uma unenkinga ekutholeni umlingani wakho ukhulelwe ngenxa yokusebenzisa iTesttosterone Cypionate ungathola imithi ye-hormone nemithi yokulungisa lokhu. Okunye ngaphandle kwalokho ungasebenzisa nezinqubo zokusiza ezenzelwe ukukhiqiza (ART). Uma ukwelashwa kubonakala kungenalutho, ungakwazi ukwandisa inani lezikhathi olala naye noma ulale ocansini uma kwenzeka ukukhulelwa. Ukugwema izingqimba ezingavimbela ukunyakaza kwesisu kuyindlela enhle kakhulu yokuphatha lokhu.
Uma yonke lemiphumela emibi ingumnene, kulindeleke ukuthi ihambe yodwa ngemva kwezinsuku ezithile noma amasonto ambalwa. Uma kungenzeki, khuluma nomklami wakho noma udokotela.
Imiphumela emibi kakhulu
Lezi yimiphumela emibi okufanele ithathwe ngokungathí sina. Uma ubona noma iyiphi yalezi zimpawu, shayela udokotela wakho ngokushesha. Cela usizo olusheshayo uma uzizwa sengathi izimpawu ziyingozi futhi uma ucabanga ukuthi ziphuthumayo kwezokwelapha. Nakhu imiphumela emibi kanye nezimpawu okufanele uzibheke;
Ukuhlaselwa kwenhliziyo- Ukuze wazi ukuthi unenkinga eyodwa, ungabona ukuthi unezinto ezilandelayo; ukunganaki emzimbeni wakho ongenhla, ukuphefumula okufushane, nobuhlungu besifuba.
Ukwandisa usayizi we-prostate gland. Kubonakaliswa ngu; ukungakwazi ukukhipha isithombeni, ukuhlunga ngenkathi ufuna ukuvuthwa, ukuhambisa umchamo obuthakathaka noma owehlisa futhi abuyele futhi ahlupheke ngokuqala ukuhlola. Esinye isibonakaliso si-nocturia (umuzwa wokuchama ngaphezulu ebusuku) kanye nesidingo esiphuthumayo futhi esivame ukuvuthwa.
Ukushaywa umoya - Inkulumo ekhungathekile ingase ibonakalise futhi ibonakale ibuthakathaka ngakolunye uhlangothi lomzimba.
Umdlavuza we-prostate- Udokotela wakho kufanele ahlole noma yiziphi izinkinga zesifo se-prostate ngaphambi nangesikhathi sokunakekelwa nge-Testosterone Cypionate ikakhulukazi uma uneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu noma ngaphezulu.
Izinkinga zesibindi- Kungabonakaliswa ukuphuza amehlo noma isikhumba, ube nomchamo omnyama, ukuphelelwa yidla, ukukhathala okungavamile, isitebe esinemibala ephuzile, ukuthola izibhamu kalula kunokujwayelekile nokuvuvukala kwamagqumeni nemilenze. Ungase futhi uzwe ukuvuvukala kwesisu nobuhlungu, ukuhlanza nokucabangela.
I-Polycythemia- Lokhu kuphakama kwesibalo segazi elibomvu. Izimpawu zalo ziyi; ukwehla ekuqapheleni kwengqondo, ukhathala, izindwangu zegazi, isifo, ukudideka, ikhanda nokubukwa ubuso.
Ukubumbana kwe-pulmonary- Lokhu kungukubunjwa kwezindwangu zegazi emaphashini. Izimpawu zayo zikhwehlela igazi, ukushaya okusheshayo, ukuzwa ukuhlunga noma ukungazinzi, ukuphazamiseka, isifuba esifubeni noma ubuhlungu obuzuzisa uma uthatha umoya ojulile nokuphefumula.
I-thrombosis ejulile ye-vein - Ukwakhiwa kwamagundane egazi emilanjeni yakho emilanjeni ejulile kubonakaliswa ubuhlungu nokuvuvukala kwemilenze yakho.
Umthamo we-testosterone cypionate
Isilinganiso se-testosterone cypionate sithonywe ezinye izici. Lezi izi;
Yeka ukuthi lesi simo sibi kangakanani
Ezinye izifo ongaba nazo
Indlela umzimba ophendula ngayo umthamo wokuqala
Amafomu wezidakamizwa namandla
Kunezinhlobo ezimbili ze-Testosterone Cypionate owokuqala ukuba ifomu elijwayelekile. Isixazululo esingenakulungiswa ngamandla ka-100mg / ml no-200mg / ml.
Owesibini yi-Depo-testosterone efana nefomu elingenalutho. Itholakala ku-100mg / ml no-200mg / ml.
Isilinganiso se-hypogonadism eyinhloko
Isilinganiso sabantu abadala
Isilinganiso sokuqala esingajwayelekile-Umthamo udokotela ozowunquma uzoxhomeka ekuhloleni kwakho kanye nobudala bakho. Ngokusekelwe ezifunweni zakho udokotela angakwazi ukuthi iyiphi imingcele engcono kakhulu kuwe. Angabeka umthamo we-50-400 mg kuwo wonke amaviki e-2-4.
Ukwenyuka kwesilinganiso- Ungase utshelwe udokotela wakho ukuba anyuke umthamo kuye ngokuthi uphendule kanjani ukwelashwa, amazinga wegazi we-testosterone nemiphumela emibi.
Isilinganiso esiphezulu sale mithi yi-400 mg injection emisipha njalo ngemva kwezinsuku ezimbili.
Isilinganiso sezingane (iminyaka ye-12-17)
Isilinganiso sokuqala sokuqala - Udokotela wakho uzochaza imithi yengane yakho kuye ngokuthi unakekelwa kanjani kanye nobudala bakhe. Uzohlinzeka ngezidakamizwa ngokuvumelana nezidingo zakho. Ngokuvamile, angase ancoma umthamo we-50-400 mg injection emisipha yakho encane njalo emavikini amabili kuya kwamane.
Ukwanda kwenani- Udokotela anganquma ukwandisa umthamo wengane yakho kuye ngemiphumela yabo emibi, impendulo yokwelashwa namazinga egazi le-testosterone.
Isilinganiso esiphezulu sokujova esiswini sakho sezinsana kufanele sibe yi-400 mg njalo amasonto amabili.
Isilinganiso sezingane (iminyaka ye-0-11)
Izifundo ngokuphepha nokusebenza kahle kwale mithi ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyishumi nambili zingakenziwa.
Isilinganiso sokwelashwa kwe-hypogonadotropic hypogonadism
Isilinganiso sabantu abadala (iminyaka engu-18 nangaphezulu)
Isilinganiso sokuqala esilinganiselwe- Isilinganiso sakho sihlukahluka ngokusho kwakho nokugula kwakho. Udokotela anganquma ngesilinganiso ngokuya ngezidingo zakho. Umthamo we-50-400mg injection emisipha njalo ngemva kwamasonto amabili kuya kwamane.
Ukunyuka kwesilinganiso- Udokotela angase anikeze ukweluleka kokwanda kwesola kuye ngemiphumela emibi, impendulo yokwelapha namazinga egazi le-testosterone.
Isilinganiso esiphezulu se-400 mg injection emisipha yakho njalo ngemva kwezinsuku ezimbili.
Isilinganiso sokuqala esilinganiselwe-Ukulinganisa kwengane yakho kuncike ekuxilongweni nasekupheleni kweminyaka yabo. Udokotela unquma ngalokhu kuye ngezidingo zengane yakho. Ngokuvamile, umthamo kufanele ube umjovo we-50-400 mg emisipha ngemuva kwamaviki angu-2-4.
Isilinganiso sanda-Izinga lomntanakho lingalungiswa ngokwemiphumela emibi abayithola, impendulo yabo ekwelashweni nasezingeni legazi le-testosterone.
Isilinganiso esiphezulu esifakwe kumisipha yengane yakho kufanele sibe yi-400mg njalo ngemva kwamasonto amabili.
Akukaqinisekisiwe ukuthi ngabe le mithi iphephile noma isebenza kahle yini izingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi nambili.
Uma kwenzeka ukuyisebenzisa ukwakha imisipha yokuphumelela kwezemidlalo umthamo we-100-200 mg walesi sidakamizwa ngeviki ngokwanele. Ngemuva kwamasonto amane, ungase ukwandise umthamo ngokuya ngemiphumela oyitholayo emzimbeni wakho noma ngokusho ukuthi umzimba uthinta kanjani ukusetshenziswa komuthi.
Isikhathi ngasinye, i-testosterone cypionate isetshenziselwa ukulwa nemiphumela ye-T-level ye-dropping yezinye i-steroids ukuthi umuntu angathatha. Uma isetshenziselwa lokhu, i-Testosterone Cypionate 200mg-400mg iyinani.
Umjikelezo we-testosterone cypionate
Uma unesithakazelo ekuthathiwe I-Testosterone Cypionate injection ngokwabo ngenhloso yokuchitha amanxeba nemisipha yokwakha, umjikelezo wakho kufanele ube kanje:
I-Testosterone Cypionate Cycle kufanele ibe yi-200mg masonto onke kusukela ngesonto 1 kuze kube isonto leshumi nambili. Kodwa kufanele uqaphele ukuthi uma uphawula i-Testosterone Cypionate nganoma iyiphi enye i-steroid bese isilinganiselwa sesilinganiso. Nakhu kungani?
Njalo i-steroid ine-half-life difference. Udinga ukucabangela lokhu ngaphambi kokunquma ukufaka amanye ama-steroids. Futhi, kufanele uqaphele ngenkathi uqala umjikelezo wokugubha ngoba awukwazi ukuthi umzimba wakho uzosabela kanjani nge-steroid engaphezu kweyodwa. Ukuze ugweme izinkinga qiniseka ukuthi uhlola wonke ama-steroid anikeziwe wona owokuqala. Ungakugwema futhi futhi usebenzise i-steroid eyodwa ngesikhathi esisodwa.
Ukwelashwa kwe-post cycle
Lokhu ukwelashwa kubalulekile njengokuthatha ama-steroids ngokwabo. Kungenxa yokuthi, emva kokusetshenziswa kwe-Testosterone Cypionate, ikhono lomzimba wakho wokukhiqiza leli hormone manje livinjelwe. Ngemuva kokuba usuqedile ngomjikelezo weT Testosterone, umzimba wakho ungase ukhululeke nge-estrogen. Kungenxa yokuthi umzimba wakho ubuye uthembele emilenzeni ukukhiqiza i-testosterone esikhundleni sayo ngakho-ke ama-testes awakwazi ukukhiqiza noma yikuphi.
Izixwayiso ze-testosterone cypionate
Ngaphambi kokusebenzisa le mithi, udinga ukwazi ukuthi yini engenzeka emzimbeni wakho. Kungabangela i-hypercalcemia ezigulini ezingenammoya. Uma lokhu kwenzeka, kufanele ushiye ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngokushesha.
Gwema ukusetshenziswa isikhathi eside kwalesi sidakamizwa ngamazinga aphezulu ngoba kungabangela izinkinga zokuphila ezifana ne-stroke hepatis, i-hepatocellular carcinoma, ne-adenomas ye-hepatic.
Ngisho noma kungakaqinisekiswa, iziguli ezigulisayo zixwayiswa ngokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa ngoba zingabangela i-prostatic carcinoma kanye ne-prostatic hypertrophy.
I-Testosterone Cypionate ingabangela izenzakalo ze-venous thromboembolic ezingase ziboniswe ukuphefumula ngokweqile, i-edema, nobuhlungu. Uma uhlupheka ngalokhu, yeka ukusebenzisa lesi sidakamizwa futhi uphathe isimo ngokufanele.
Kubantu abahlukumeza lesi sidakamizwa, kungabangela ukucindezeleka okukhulu kwengqondo kanye nesifo senhliziyo. Njengoba kubangelwa u-Edema, kungasongela abantu abane-hepatic, renal and heart disease. I-Gynecomastia ingase ikhule futhi.
I-benzyl utshwala esetshenziswe njengendlela yokulondolozwa kuholela emiphumeleni enzima njenge-gaining syndrome. Ngamanani aphansi, angase akuthinte. Futhi, kubantu abaphilile abaye babambezela ukukhulelwa bangase bahlupheke ngokuba nokuphakama okuncane. Kungenxa yokuthi kuthinta ukuvuthwa kwamathambo.
Kuthiwani uma ngiphuthelwa umthamo noma ukudlula ngokweqile
I-Testosterone I-Cypionate injection yindlela yokwelashwa yesikhathi eside futhi ngaleyo ndlela ingabangela imiphumela emibi uma ingathathwa ngendlela efanele.
Uma kwenzeka uyeka ukuthatha isidakamizwa ngokungazelelwe noma ungayithathi nhlobo kungabangela ukuthi imithi ingasebenzi kahle. Isizathu sokuthi izidakamizwa zisebenze ngokufanele, inani elithile kufanele libe emzimbeni wakho ngaso sonke isikhathi. Uma ungayithathi le mithi, ungase uhlupheke izimpawu ze-testosterone.
Uma ulahlekelwa umthamo noma uhluleka ukuthatha izidakamizwa ngokwesihe, kungase kungasebenzi kahle noma ukuyeka ukusebenza ngokuphelele. Kungenxa yokuthi ukuze izidakamizwa zisebenze ngendlela efanele, inani elithile kufanele libe emzimbeni njalo. Akufanele uthathe ngokweqile ku-bid yokufaka i-dose ephuthelwe. Kungabangela imiphumela emibi kakhulu. Uyalulekwa ukuba ushayele udokotela wakho bese umtshela ngesikhathi sokugcina ujova u-testosterone cypionate. Uzokusiza ukuthi ufike esimisweni esisha sokufaka isicelo.
Uma kwenzeka une-overtostone ye-Testosterone okusho ukuthi uzoba namazinga ayingozi ale mithi emzimbeni wakho. Izimpawu zayo zingabandakanya:
Ukunciphisa isibalo sesidoda
Ungase uthole iziphazamiso ezihlala isikhathi eside kunokujwayelekile
Ungase ube nama-erections avamile
I-Gynecomastia (ukwandisa ngokweqile kwesifuba)
Ukuvuvukala nobuhlungu endaweni yokujova
Uma kwenzeka usola ukuthi uthathe okuningi kwe-Testosterone Cypionate, xhumana nodokotela wakho noma isikhungo sendawo yokulawula ubuthi. Uma izimpawu zakho zinzima, yiya ekamelweni eliphuthumayo ngokushesha.
Indlela yokwazi ukuthi ngabe izidakamizwa ziyasebenza- Ungase ufune ukwazi ukuthi imithi olaphayo isebenza yini. Uzoqaphela ukuthi izimpawu ze-testosterone ephansi zinciphile.
Ukuqapha kwe-Testo Cypionate
Ukuze ugweme ezinye izinkinga ngenkathi u-Testosterone, udinga ukukhuluma nodokotela wakho ukuze akwazi ukukutshela uma ufanelekile ukusebenzisa lesi sidakamizwa. Uma unemibuzo, ungahlala ubuza kudokotela wakho ukuthola ukuqonda kangcono kwale mithi. Yiziphi izinto okufanele utshele udokotela wakho ngaphambi kokuthola umjovo we-Testosterone Cypionate?
Vumela udokotela ukuthi uyazifola kulo muthi noma noma yikuphi ukwelashwa okungenzeka ube nakho. Ukubaluleka kwalokhu ukuthi izidakamizwa zingase zibe nezinye izingxenye ezisebenzayo ongase uzizwele.
Udokotela kufanele futhi aqaphele umlando wakho wezokwelapha, isib. Uma usesikhathini esidlule unesifo sikashukela, i-apnea yokulala, i-prostate ekhulisiwe, umdlavuza (umdlavuza wesibeletho, umdlavuza webele emadodeni), umfutho wegazi ophakeme, i-cholesterol ephezulu, izinkinga zezinso, isibindi izinkinga, isifo, isifo senhliziyo (njengokuhlasela kwenhliziyo, ubuhlungu besifuba nokuhluleka kwenhliziyo) kanye nama-blood clots emaphashini nasemilenzeni.
Uma unesifo sikashukela, lesi sidakamizwa singase sinciphise ushukela wegazi lakho. Ukuze ube nokuthula kwengqondo, qinisekisa ukuthi uhlola ushukela wegazi njalo njengoba uqondisiwe futhi uvumele udokotela azi imiphumela. Uma ubona noma yiziphi izimpawu zeshukela egazini eliphansi njengokungathi izinyawo noma izandla, isizungu, umbono ongenalutho, indlala, ukushaya kwenhliziyo okusheshayo, ukuzamazama, noma ukujuluka okungazelelwe kuzisa udokotela wakho ngokushesha. Ukuphikisa lokhu, udokotela wakho angenza izinguquko ekudleni kwakho, ohlelweni lokuzivocavoca, kanye nemithi yesifo sikashukela.
Ngaphezu kwalokho, i-Testosterone Cypionate ingathinta i-cholesterol yakho kanjalo yandisa ingozi yegazi (isifo se-coronary artery) nezinkinga zenhliziyo. Into ephephile kakhulu ukuba udokotela aqaphele amazinga akho e-cholesterol eduze.
Yazisa udokotela wakho uma ungakwazi ukuhamba noma uhlale ulele embhedeni ngenkathi usebenzisa Testosterone Cypionate. Ukuvimbela izinkinga, kufanele ugcine izinga lakho le-calcium yegazi njalo. Uma uhlinzwa ngokushesha, kufanele utshele udokotela wamazinyo wakho noma udokotela ngazo zonke izidakamizwa ozisebenzisayo ngaleso sikhathi. Kumele kufake yonke imikhiqizo ye-herbal, okungewona odokotela, nemithi yemithi kadokotela.
Uma usebenzisa lesi sidakamizwa kumncane wakho, kufanele uqaphele kakhulu ngoba kungathinta ukukhula kwethambo okuvimbela ukuphakama kwabantu abadala. Ngesikhathi ukwelashwa, kufanele uqaphe ukukhula nokuthuthukiswa kwamathambo wengane yakho. Ukuqapha kufanele kuthathwe uma abadala asebekhulile belapha kulokhu kukwelashwa ngoba banomthelela kakhulu emiphumeleni yaso efana nokuvuvukala kwezingalo nemilenze, izinkinga zesibindi / ze-prostate.
Ubuhlungu bokukhulelwa kwesisu bukhulu kakhulu, futhi njengoba lesi sidakamizwa singathinta ukukhulelwa kwakho, kunconywa ukuthi uhlale kude nayo uma ulindele. Cabanga ngokusebenzisa izinhlobo ezinokwethenjelwa zokulawulwa kokubeletha ezifana namaphilisi okulawula ukubeletha noma amakhondomu ukuze ugweme ukukhulelwa ngenkathi kule mithi. Kuthiwani uma kwenzeka ngengozi? Vumela udokotela wakho azi ngakho ngokushesha.
Akukaqinisekisiwe okwamanje uma le mithi ingadluliselwa ubisi lwebele. Kodwa-ke, kwaziwa ukuthi kungathinta ukhiqizwa ubisi ngaleyo ndlela kubangela ukulimala ingane engumntwana. Ukugwema noma yikuphi ukulimala, ungasebenzisi lesi sidakamizwa ngenkathi ukondla. Kumelwe futhi ubuke iseluleko sikadokotela ngaphambi kokuncelisa.
Indlela yokujova i-Testosterone Cypionate
Ukuzivocavoca kungase kuzwakale njengomsebenzi onzima, kodwa uma uqonda ukuthi kwenziwa kanjani, uzobonga ukuthi akufanelekile ukukhathazeka. Ngamanje ungase uzibuze; ngiqala kuphi? Yiba nokuzola, ukuphuza nokuphefumula. Nakhu okumele ukwenze:
Qiniseka ukuthi unesilinganiso esifanele se-Testosterone Cypionate- Counter hlola ukuthi unesilinganiso esifanele salesi sidakamizwa ngaphambi kokunikeza umjovo.
Thola inaliti ehlanzekile, efanelekile ne-syringe- Ukuze ube nomjovo we-Testosterone Cypionate; Kunconywa ukuthi usebenzisa inaliti oyinyumba engakaze isetshenziswe esikhathini esidlule. Sebenzisa njalo ohlanzekile futhi oqoshwe noma kunini lapho ufuna ukuba nomjovo. Udinga ukwazi ukuthi i-Testosterone Cypionate inamafutha amaningi futhi inamahloni futhi ngakho-ke, kufanele usebenzise inaliti ekhudlwana ukuze udale isidakamizwa. Izinaliti ezincane zibuhlungu ukuze kuvimbele lokhu; ungayifaka esikhundleni sayo sinomzimba owodwa uma isikhathi saso sokunikeza umjovo. Sicela uqaphele ukuthi uma inaliti noma i-syringe yehla, ayisekho oyinyumba futhi awunayo inketho ngaphandle kokuba uyilahle.
Hlanza izandla zakho ngokugcwele futhi ugqoke amagilavu ​​oyinyumba- Ukuhlanza izandla ngokuphelele kukuvimbela ekutheleleni, futhi uma amagilavu ​​akho ehlangana nanoma yiziphi izinto noma izinto ezingenasici, kufanele uzibeke esikhundleni.
Dweba umthamo ofanele-Ukwenza lokhu ukufaka umoya wokufaka umoya ngaphakathi ebhodleleni ukukhulisa umfutho womoya wangaphakathi. Inzuzo yalokhu ukuthi ungakwazi ukudweba ngokushesha lesi sidakamizwa naphezu kokuqina kwawo. Ungabe usuvula ibhodlela phansi bese uthola umthamo oqondile wemithi oyidingayo.
Manje shintshela enaliti encane-Asikho isidingo sokuzicabangela ubuhlungu obunzima uma kukhona into ongayenza ukuze wenze inqubo kancane kancane. Ukuze uqinisekise ukuthi imithi ayichitheli njengoba wenza lokhu, ubambe iphuzu-up, udwebe futhi ususe. Sebenzisa isandla esicwebileyo bese ubeka esikhundleni sesinye esincane. Kufanele futhi ibe yinyumba futhi ingasetshenzisiwe.
Gcoba isirinji-Uma kuziwa emilenzeni, noma yikuphi ukuqhuma emoyeni okungena emzimbeni kungabangela inkinga enkulu. Ukuqinisekisa ukuthi lokhu akukwenzeki, udinga ukufisa. Lokho okwenzayo kubamba i-syringe ekhomba ngenaliti engafakiwe. Bheka ngokucophelela noma yikuphi ama-bubbles emoyeni angase abe phezu kwensilinga. Flick kusuka ohlangothini ukuze uhambise phezulu. Uma usuqinisekisa ukuthi isidakamizwa si-bubble mahhala, xosha umoya. Ukuze wazi ukuthi konke kuphelelwe, linda ihlazo lesisombululo sokuphuma kwiphuzu lesipilisi. Qaphela lapho wenza lokhu ukugwema ukuchitha phansi.
Lungisa indawo yomjovo-Lo mjovo kufanele unikezwe phezulu engxenyeni engaphandle noma esifundeni sangenhla sangemuva kwethanga. Lezi akuzona kuphela izindawo okujola ngayo umjovo, kodwa yizona ezivamile. Sebenzisa utshwala oyinyumba ukuze usule indawo. Ngokwenza lokhu, amabhaktheriya awazange abe nesikhumba esikhumbeni sakho, futhi ivimbela ukutheleleka. Ukuze ugweme ukulimaza izitsha zegazi noma izinzwa, khetha indawo yokujola engxenyeni engenhla yangaphandle ye-glute.
Inject- Ukukhathazeka ukuthi ungafaka kanjani i-Testosterone? Bamba i-syringe equkethe izidakamizwa ze-90 degrees ngaphezu kwendawo yokujola engakhiwe yi-disinfected. Yishayela ngokushesha bese uyidweba kancane. Uma kwenzeka ubona noma yiliphi igazi ngaphakathi kwesirinji okusho ukuthi ulimaze umuthi. Thola enye indawo efanelekile futhi ujobe umuthi kancane kancane. Ukuzwa kabi noma ubuhlungu kungokwemvelo kodwa uma ubuhlungu buyimisa kakhulu futhi uxhumane nodokotela ngokushesha.
Nakekela indawo yokujola uma usukhulile inaliti. Ukwenza lokhu ngokuphumelelayo, hlola iphuzu lokungena kwenaliti bese ubeka ibhola lokuhlanza elihlanzekile. Lahla zonke izinaliti ezisetshenzisiwe kanye namagundane ngokufanele. Uma uhlangabezana nokuvuvukala okungavamile, ubomvu noma ukungakhululeki, thintana nodokotela ngokushesha.
Indlela Storage I-Testosterone Cypionate
I-Testosterone Cypionate kufanele igcinwe ku-20 kuya ku-25 degree Celsius. Futhi uyibeke kude ekukhanyeni, umswakama, nokushisa. Gcina yonke imithi kude nezingane ukuvimbela ubuthi ngokwabo. Lapho isidakamizwa siphelelwa yisikhathi, siphonsa ngendlela efanele. Gwema ukuxosha phansi le mithi noma ukuyidlulisela phansi njengokwenza okungcolile.
Ukupheka ukwenza Testosterone Cypionate nge-steroids powder
Unentshisekelo ekwenzeni i-Testosterone Cypionate? Lezi zokupheka zizokunikeza okudingayo.
1. I-Cypionate yokuhlola ye-5gram ku-20ml ku-250mg / ml
5gm ye-cyp yokuhlola
1ml ye-Benzyl Utshwala olingana no-5% BA
I-25 ml yamafutha wesesame
3cc, izilinganiso ze-cc 5 / 10
18 / 20 gauge izinaliti
Isihlungi se-Whatman oyinyumba
Hlola ama-5 amagremu we-powder
Beka i-powder ku-vial
Engeza i-BA ku-vial
Beka amafutha kuhhavini bese uwushise. Kuyasiza ukuyihlobisa. Sishisa okungaphezu kwalokho okudingayo ukuze uthole okwanele epanini.
Engeza amafutha ku-vial bese ulondoloza i-2ml kamuva. Shake the vial ngobumnene.
Ungashisa inhlanganisela uma uthanda. Ungayifaka epanini lokuthosa noma iso lesitofu.
Thatha inaliti ye-18 noma i-20 gauge bese uyibeka ku-vial oyinyumba. Futhi, faka isihlungi se-Whatman oyinyumba.
Ukuze unciphise ingcindezi, faka enye inaliti ku-vial oyinyumba.
Ukusebenzisa i-syringe ukukhipha isisombululo bese ugijima ngokusebenzisa isihlungi se-Whatman.
Thatha i-2ml yamafutha ayesinye isirringe bese uqhuba i-Whatman kwisisombululo.
2. I-Cypionate yokuhlola i-10 ukuguqulwa kogu 40 ml ku-250mg / ml
I-5 ml yamafutha wesesame
2ml ye-Benzyl Utshwala = 5% BA
Ama-10 amagremu we-cyp yokuhlola
I-3cc ne-5 / i-10cc yeringering
3. 60ml ku-250mg nge ml
8 ml we-5% BA
I-7 milliliter yamafutha aqoshiwe
Ama-15 amagremu wePypionate Powder
4. 250 ml ku-80mg nge ml
I-185 ml yamafutha aqoshiwe
Ama-45mls we-Benzyl Benzoate
5ml ye-Benzyl Alcohol
Ama-20 amagremu we-Testosterone Cyp Powder
250 ml ku-200mg nge ml
I-5ml yamafutha wezithelo zamagilebhisi
45 ml we-Benzyl Benzoate
50g we-Testosterone cyp Powder
5. 100ml ku-250mg nge ml
25 ml wamafutha omvini
2ml ye-Benzyl Alcohol
75 ml we-25g Testosterone cyp Powder
Indlela yokuqeda i-testosterone Cypionate kusuka kuma-powders eluhlaza okwesibhakabhaka
Ungase ucabange ukuthenga i-steroids powder oluhlaza bese wenza Testosterone esiphelile ngokwakho. Sizokufundisa indlela yokwenza i-testosterone Cypionate powder.
I-milliliter ngayinye ye-100 mg ml ml ngayinye iqukethe:
I-100 mg ye-Testosterone Cypionate powder
I-1 milliliter ye-Benzyl benzoate
I-736 mg yamafutha we-Cotton
I-45 mg ye-Benzyl utshwala
Isilinganiso se-digital esingakwazi ukukala i-0.01g
Isihlungi se-syringe oyinyumba 22um
Ingilazi engcolile yobukhulu obunoma yisiphi isayizi
I-syringe yanoma yisiphi isayizi
Isinyathelo sokuqala ukukala isisindo se-Testosterone Cypionate bese uyifaka ku-beaker yeglasi. Engeza i-Benzyl Benzoate ne-Benzyl Alcohol.
I-solvents iqala ukuqeda i-powder encane kodwa uma ufuna ukusheshisa inqubo, ungasebenzisa amanzi okugeza. Beka umcengezi emanzini amancane epanini noma kwenye indawo efanelekayo. Ungasebenzisi amanzi ashisayo kakhulu ngoba imikhiqizo ethile ingase ifake i-oxidise. Amafutha othwala ohlose ukuwasebenzisa kufanele abe nokushisa okufanayo njengesixazululo ngakho uma uthatha isinqumo sokufudumala isixazululo, khona-ke amafutha othwala kufanele ashushu. Isizathu sokwenza lokhu ukuqinisekisa ukuthi yonke i-powder iyancibilika ezingxenyeni. Qinisekisa ukuthi akukho powder ebonakalayo esele ngemuva kwesisombululo.
Thatha amafutha wekotton afudumeleyo abe yisisombululo. Hlanganisa kahle futhi uqinisekise ukuthi ayikho i-hormone swirls futhi uma kwenzeka, thatha ikhambi ngaphandle kokugeza amanzi bese uyifaka enqubo yokuhlunga.
Isinyathelo esilandelayo sisebenzisa isringana ukuze udwebe izixazululo ozisebenzisayo ukuzihlunga nazo. Ungasebenzisa i-syringe enkulu kanye noma i-syringe encane kaningi. Khipha isihlungi se-syringe ye-0.22 umbi oyinyumba bese uphonsa inaliti eluhlaza endaweni engaphansi bese ubeka isringana.
Sebenzisa i-swab yotshwala ukuze usule ingxenye engenhla yewayini eliyinyumba. Faka inaliti eluhlaza kuyo bese ufaka inaliti igxilwe kusihlungi seringithini ku-vial.
Ngezinye izikhathi ungathola ukuthi isihlungi singavinjelwa noma inqubo ingancipha. Kulolu cala, ungenza esikhundleni sesihlungi ngolunye ukonga isikhathi. Uhlobo nomthamo we-steroid powder oyisebenzisayo yilokho okuqhathanisa isikhathi esithathwa yinqubo.
Umkhiqizo ulungele ukusebenzisa emva kokuhlunga umkhiqizo ku-vial oyinyumba.
Ukubuyekezwa kwe-Testosterone Cypionate
Uke wezwa mayelana nokubuyekezwa kwe-Testosterone Cypionate? Le brand yiyona engcono kakhulu futhi uma ungakenzi ngokwengqondo yakho, ungase ucabange ukufunda izibuyekezo ezilandelayo.
U-Yuan uthi "Njengoba ngiqale le mithi ngonyaka odlule, ngiye ngaphawula ukuzuza okukhulu ekuzivocavoca. I-abs yami ibonakala kakhulu futhi lokhu kungenze ngithande ukuvivinya umzimba nakakhulu ".
Uthi uLie akalokothi amathayeli aye ejimini. Uyakwazi ukuya emisebenzini yonke imihla ngaphandle kokuba inja ikhathele. Nsuku zonke emva komsebenzi uya esikoleni sokuzivocavoca futhi enze umsebenzi odlulele noma nini lapho ezwa khona.
U-Chen ubelokhu ejoza i-200 mg njalo ngemva kwamasonto amabili kusukela udokotela eyishilo. Uthi "Kuze kube manje ngisesendleleni efanele ekutholeni imisipha nokulahlekelwa isisindo. Ngenxa yalesi sidakamizwa, manje ngizizwa ngingumuntu ".
Intengo ye-Testosterone Cypionate
Manje ukuthi uyazi ukuthi lo mkhiqizo ungakwenza ngani, ungase ufune ukwazi inani le-Testosterone Cypionate. Ngakho-ke i-Testosterone Cypionate ibiza kanjani? Kuxhomeke ekutheni ufunani nesilinganiso sakho.
Kungase kuguquke nakwezitolo ezahlukene kuye ngokuthi indawo.
Indlela yokuthenga Testosterone Cypionate online
Ungathenga i-Testosterone Cypionate ngokuchofoza kwegundane. Iza nezinzuzo eziningi ezihlanganisa ukulula. Nakhu okumele ukwenze;
Sesha iwebhusayithi ye-AASraw.com
Sesha igama elithi "testosterone cypionate."
Gcwalisa ifomu lesicelo lokuthenga bese ulihambisa. Izobandakanya ubungakanani nendawo yakho.
Kungase kudingeke ukuthi ugcwalise uhlu lwemibuzo emfushane yezokwelapha ukuze unqume ukufaneleka kwakho ukuthenga umkhiqizo. Ungakwazi ukuyifaka ngokushesha bese uhambisa. Uchwepheshe wethu uzobe esebukeza futhi mhlawumbe wamukele i-oda lakho.
Uma i-oda lakho lamukelwe, manje usungenza inkokhelo usebenzisa izindlela ezilula kakhulu, futhi uma usuqedile, izimpahla zithunyelwa ngokushesha. Indawo yakho izocacisa inani lemikhiqizo kuyoba ukuthutha.
Ngempela, uma ufuna ukwenza ushintsho kohambo lwakho lokuqinisa umzimba, lokhu kuyinto yangempela. Ngeke neze uzisole ukukhetha le ndlela kusukela izinzuzo zingenakubalwa. Ungakwazi manje ukumisa ukuthola enye i-steroid ngoba usuvele uthola lowo amandla akhe engakafaneli emakethe.
Okungaphezu kwalokho ukuthi ungadla noma yini oyithandayo ngaphandle kokwesaba kokugcina amafutha. Umzimba wakho uzoguqulwa, futhi uzofeza umzimba wakho omuhle kakhulu. Uzodinga nokuqeqeshwa okuncane ukuze uthole umzimba owake wawuwuthanda njalo.
Asikho isidingo sokukhathazeka ngokubuyiselwa kwakho ngemuva kokuqeqeshwa okunzima. Kungenxa yokuthi lo mkhiqizo uzothuthukisa ukuchithwa kwe-nitrogen kanye neprotheni synthesis. Futhi, uzothola ukugqugquzelwa okwengeziwe, futhi uma lokhu kube yinkinga kuwe, manje unayo yonke ingqondo yokukhahlela-uqale ukuqeqeshwa kwakho futhi.
I-Testosterone Cypionate ayithembisi ukukwenza ube mnandi kakhulu, kodwa iyokusiza ukuba ufeze imigomo yomzimba ezokusiza ukuthi uzuze izindondo nemidlalo.
Emabhizinisini ethu, siqasha abantu abahlukile ezindaweni ezihlukahlukene. Ukuhlangenwe nakho kobuchwepheshe, ukuqeqesha okuhle kakhulu, nokusebenza okumnandi abanakho okuyiwona owenza ukuthi siphumelele. Njengesikhungo, sibheke phambili ekuthuthukiseni intuthuko yabo ngokuqeqesha njalo. Siphinde sinikeze amathuluzi okwanele okukhulumisana nokwandisa ukuziphatha kwabo, ukuzibophezela nokusebenza kahle.
Sinikeza imikhiqizo emihle kakhulu emncintiswaneni omkhulu wokuncintisana. Imikhiqizo yethu ihlanzekile, futhi ungaqiniseka ukuthi ukusebenza kwabo kungabonakali. Kungenziwa ukuthi kungenzeka ukuthi sisebenzisa imishini engcono kakhulu kuzo zonke izinqubo zethu zokukhiqiza. Ngesikhathi sokukhiqiza, sihambisana nayo yonke imithethonqubo kanye nokuhlolwa kwekhwalithi ukuqinisekisa ukuthi sinikeza imikhiqizo eyanelisa izidingo zamakhasimende ethu.
Senza konke okusemandleni ukugcina imvelo yethu ihlanzekile ngokuqinisekisa ukuthi imisebenzi esenzayo ayikuthinti kabi. Okokugcina, amaklayenti ethu angumgogodla wethu. Isevisi yethu yamakhasimende iyasabela kakhulu futhi ilalela wonke amakhasimende. Enye into ehlukanisa nabanye abahlinzeka ngemisebenzi ukuthi sithatha impendulo yamakhasimende ngokungathí sina. Yiba isikhalazo noma isincomo; izwi lakho liyakwamukela njalo.
Oda kusuka kithi namhlanje futhi uhlangabezane nezinsizakalo zethu ezinhle kakhulu. Ngeke nje uthole imikhiqizo yakho maduzane kodwa bayothola umsebenzi owenzelwe wena.
I-Principal and Practice of Endocrinology and Metabolism, ehlelwe nguKenneth L. Becker ikhasi 1189-1893
I-Testosterone: Isenzo, Ukuntuleka, Ukufakwa endaweni, ehlelwe ngu-E. Nieschlag, i-HM Behre 272-317
I-Williams Bookbook ye-Endocrinology, nguShlomo Melmed, uKenneth S. Polonsky, uP. Reed Larsen, uHenry M. Kronenberg, ikhasi 758-766
I-Mibolerone enamandla kunayo yonke ye-steroid (Hlola amaconsi) ku-intanethi
Ama-Nootropics ama-7 amahle (ama-Smart Drugs) emakethe ye-Sunifiram Izinto ze-10 okumelwe wazi ngaphambi kokuthatha i-DMAA
I-Drospirenone powder (i-67392-87-4)
I-Parabolan (Tren Hex) powder